Kidnapping tetsy Behoririka : Misy hetsika ilàna vola be? -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping tetsy Behoririka : Misy hetsika ilàna vola be?
08/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Teratany Karana iray indray no nisy naka an-keriny omaly maraina tokony ho tamin’ny valo ora latsaka teny Behoririka. Roalahy nitondra moto cross ary nilanja basy poleta sy kalachnikov araka ny filazan’ireo nanatri-maso no avy hatrany dia nanambana basy ilay teratany Karana ary nampiakatra azy teny ambony moto. Nanao taingin-telo izy ireo araka ny resaky ny olona teny an-toerana ary dia nanavatsava an’i Behoririka. Vao ny alatsinainin’ny Pantekosta teo anefa no navotsotr’ireo mpaka kidnapping ilay teratany Karana nisy naka an-keriny teny Ilafy. Naharitra 23 andro ity farany ity vao afaka teo am-pelatanan’ireo olon-dratsy ary voalaza fa nandoa vola be tokoa ny fianakaviany ho tambin’izany famotsorana azy izany. Tsy nahazoana antsipirihany loatra moa iny raharaha iny satria nataon’ny fianakaviana an-jorom-bala ny haino aman-jery teto an-toerana, toraka izany koa ny manampahefana sy ny mpitandro filaminana.
Mazava ho azy fa vola be no tanjona amin’itony fakàna an-keriny itony ary tena misy hetsika ilàna vola be mihitsy any ambadika any. Mazàna tokoa mantsy no mirongatra ny kidnapping Karana rehefa ankatoky ny fifidianana na koa misy hetsika mifono ambadika politika. Mila vola avokoa ireny hetsika fanakorontanana sy hetsika ara-politika ireny ary efa noporofoin’ny tantara fa mifandraika amin’ny toe-draharaha politika hatrany ny tsy fandriampahalemana, indrindra mikasika ity kidnapping Karana ity. Mahalasa saina ihany mantsy ny mahita ireny hetsika ara-politika sasantsasany ireny. Avy aiza ny famatsiam-bolan’izy ireny, sarotra ihany mantsy ny hilaza fa ireo mpiantsehatra no nanao tsipaipaika nahafahana nanofa efitrano eny amin’ireny hotely avo lenta ireny. Iaraha-mahalala rahateo koa fa tsy afaka misaraka amin’ny vola ny hetsika eto amintsika.
Iny kidnapping tetsy Behoririka iny izany izao no fakàna an-keriny teratany Karana fanindroany tato anatin’ny iray volana monja, manamafy ilay petra-kevitra etsy ambony ny amin’ny fisian’ny hetsika ilàna vola be any ambadika any izay azo antoka fa tsy maintsy misy ifandraisany amin’ny resaka fanakorontanana ny fiainam-bahoaka amin’izao ankatoky ny fankalazana ny fetin’ny Fahaleovantena izao. Efa mazava mantsy ny tanjon’ireo mpanongam-panjakana fa ny hanao izay tsy hisian’ny “andro mihiratra” ho an’ity fitondrana Hery Rajaonarimampianina ity.